16 mirefy 250w 36v herinaratra bisikileta amin'ny miafina bateria amin'ny seatpost r809b hita ao amin'ny Ebay Amazon - Shenzhen China Rooder Teknolojia
16 mirefy 250w 36v herinaratra bisikileta amin'ny miafina bateria amin'ny seatpost r809b hita ao amin'ny Ebay Amazon
Potraka fa mora - Ny nofonosiny mampiasa bisikileta iray kilasy aluminium aerospace toe & mora mifanaraka amin'ny kamiao sy ny fiara rehetra habe. Ny bisikileta mampiasa maotera iray 36 V bateria & A 250-Watt maotera izay nasain'i tamin'ny 3 hours.Ideal ho zara toerana fitahirizana.
5 Pas Riding System- asa Multi LCD fampisehoana, 12 teboka sensor sy FOC miara-maso mitambatra ny Pas system.You afaka mitaingina na amin'ny fomba afaka mitsofoka, na amin'ny Cruise fanaraha-maso amin'ny fomba madio avy pedaling na bisikileta raha toa ka mila fomba exercises.The misy sensor afaka mamantatra fikasana rehetra indrindra
Fa mamaly ny Everywhere- voalamina tsara io E-bisikileta bateria no miafina eo amin'ny fipetrahan'ny lahatsoratra. Afaka mahazo azy handidy azy na aiza na aiza tianao. Tsy tsotra sy mazava ny hanatanteraka izany.
Adjustable Electric Bike: avelany be ny haavon'ny lasely fanitsiana mba hifanaraka ny mpitaingina azy ary manify amin'ny famoahana haingana-clamp mba hanampy tamin'ny famoretana ny bisikileta haingana
Patanty Frame: ny e-bisikileta mandany 100 isan-jato ny toe firaka aluminium, ny anoloana fork na ny fanaka avo-toe hery sy fampiononana feno Premium mivadi hisakana ny fiasan'ireny
Rooder 16 mirefy 250w 36v herinaratra bisikileta amin'ny miafina bateria amin'ny seatpost hita ao amin'ny Ebay Amazon sy roodergroup.com
Frame: aluminium rafitra
Motor: 36V250W gearless moto
Niandraikitra Time: 3-4hours
Velomy ny: anoloan'ny & aoriana kapila fiatoana
Front sy aoriana nitondra jiro
Pack size: maridrefy 1320 * 650 * 260mm
Previous: roa kodia foldable herinaratra scooter amin'ny fampiatoana r803p
bateria niasan'ny bisikileta
tsara indrindra y bisikileta
tsara indrindra herinaratra bisikileta
levitra herinaratra bisikileta
y bisikileta fivarotana
y bisikileta amidy
elektrika manampy bisikileta
herinaratra bisikileta amidy
vidin'ny herinaratra bisikileta
herinaratra bisikileta ho an'ny ankizy
herinaratra bisikileta kodia
tsingerin'ny vidin'ny herinaratra
pedal herinaratra bisikileta
hanoto herinaratra bisikileta
haingana indrindra herinaratra bisikileta
foldable herinaratra bisikileta
Ary mbola hanohon herinaratra bisikileta
goavana herinaratra bisikileta
andriambaviny herinaratra bisikileta
2018 Eoropa mafana fivarotana e-bisikileta elektrika bicyc ...
Rooder citycoco caigiees r804i kodia lehibe electr ...
foldable naterak'ireo kodiarantsika roa 60V 2400W maotera roa sosona eny R ...